Ndi Enterprise IoT Ga-enyere Aka Kwụsị Industrylọ Ọrụ Mgbasa Ahịa? | Martech Zone
Ndị na-agbazinye ego bụ na-akwado ego ụlọ ọrụ na-ere ahịa ugbua. Bloomberg na-ebu amụma banyere Polọ ahịa Apocolypse nwere ike ịbịakwasị anyị ngwa ngwa. Lọ ahịa ndị na-ere ahịa na-agụ agụụ maka ihe ọhụrụ, na Internet Ihe naanị nwere ike inye mmụba dị mkpa.
N'ezie, 72% nke ndị na-ere ahịa na-arụ ọrụ ugbu a Enterprise Internet nke Ihe (EIoT) oru. Ọkara ndị na-ere ahịa niile etinyelarị teknụzụ dị nso na azụmaahịa ha.
Gịnị bụ EIoT?
N'ime ụlọ ọrụ taa, ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke usoro yana ihe na-ejikọrịrịrị njikọ ma ọ bụ na -emepụta mmetụta maka ijikọ. Onye ọ bụla n'ime ha ihe Ga-abụ ọkachamara na otu ọrụ, dịka. mobile ngwaọrụ, ngagharị sensọ, digital ngosipụta. Ọ bụrụ na ndị a ihe ejikọrọ ka ha nwee ike wepu ozi n'ụzọ dị iche iche, ọ na-enye ohere azụmaahịa ịmepụta ụfọdụ ngwa na-adọrọ adọrọ.
Kedu ka EIoT si enyere Aka Aka Ahịa?
Ihe ngosi igwe na ihe ngosi ihe omuma dijitalụ bụ teknụzụ ndị a kpọtụrụ aha maka nnyefe nke mbọ a na-echekwa n'ime ụlọ ahịa
63% nke ndị na-azụ ahịa ga-ebudata ngwa nke iguzosi ike n'ihe, na 57% kesara ozi nkeonwe ha na ika ha tụkwasịrị obi
66% nke ndị na-azụ ahịa ga-eji Wi-Fi na-echekwa iji nweta ozi ngwaahịa ma ọ bụ jiri uru pụrụ iche
Ihe karịrị 50% nke ndị na-azụ ahịa dị njikere ịnata onyinye ahaziri iche maka mmasị ha na ụlọ ọrụ ịzụta mgbe ha dị nso ma ọ bụ na ndị na-ere ahịa
78% nke ndị na-azụ ahịa na-atụle mkpa ọ dị ijikọta azụmahịa e-commerce na ahụmịhe ụlọ ahịa dịka azụmahịa dị oke mkpa
80% nke ọtụtụ puku afọ na ndị na-azụ ahịa dị elu kwuru na ha ga-azụta ihe ọzọ site na ụlọ ahịa ndị na-ere ahịa na-enye nnukwu ngwa ahịa ụlọ ahịa na-ere ahịa
68% nke ndị na-azụ ahịa zụrụ ngwaahịa n'ihi ọdịdị na-adọrọ adọrọ nke akara ngosi dijitalụ
Ihe omuma ihe omuma a sitere na CUBE na-enye ihe omuma atu nke ihe ejikọrọ na EIoT na ngwa ahia. CUBE emepụtala ngwaọrụ nke na-enyere aka ịhazi na imekọ ihe ọnụ n'etiti egwu dị na ụlọ ahịa na izi ozi, akara vidiyo, na egwu ejidere.
Ihe omuma ahu na akowaputa nsogbu ndi ozo na EIoT, tinyere nchedo, nzuzo, ikwuputa na nsogbu nsogbu. Ndị na-ere ahịa ahịa kwesịrị ị attentiona ntị na nsogbu ndị a ka ha na-ahọrọ ndị ha na ha ga-arụ ọrụ n’ọdịnihu.
Tags: digital signagemmiriulo oru ntaneti nke iheulo oru iotinternet nke iheiotihe ngbaghari nke ekwentiretailmkpọsa mkpọsa mkpọsaụlọ ọrụ ire ahịamkpọsa iotJeriko